आयात प्रतिस्थापन गर्न सात क्षेत्रमा विशेष जोड «
नेपाली कांग्रेसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सात क्षेत्रलाई विशेष जोड दिने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत यस विषयमा सुझाव पेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’को लोर्कापण तथा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विमर्शमा बोल्दै महामन्त्री थापाले अर्थ मन्त्रालयले नेपाली कांग्रेसको सुझाव बजेटमा समावेश गर्ने पनि बताए । उनले निश्चित वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्काल सकिने भन्दै नेपालमा लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउने योजना बजेटमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखे ।
“नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका वस्तुहरु पनि विभिन्न मुलुकबाट ठूलो मात्रामा आयात हुँदै आएका छन् । त्यस्ता कतिपय वस्तु भन्सार छलेर नेपाल भित्रिँदा राजस्वमा पनि योगदान नगर्ने र नेपाली वस्तुहरुलाई पनि प्रतिस्थापन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले बजेटमार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “आयात प्रतिस्थापन गर्न सात क्षेत्रलाई एक दशकसम्म विषेश जोड दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको निष्कर्श छ । सोही अनुरुप आगामी दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र उपभोग बढाउने दशकको रुपमा लिनुपर्छ । खपत गर्नका लागि हामीसँग आन्तरिक र बाह्य बजार छ । निजी क्षेत्रबाट मेड इन नेपाल तथा मेक इन नेपाल भन्ने अभियानहरु सञ्चालन भएका छन् । यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ ।”
थापाका अनुसार कांग्रेसले एक दशकसम्म धागो, जुत्ता, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, हस्तकला तथा नयाँ अवसर र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । “यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँ, आन्तरिक लगानी सुनिश्चित गरौँ, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरौँ । साना, मझौला तथा नवप्रवद्र्धक यसतर्फ प्रोत्साहन गरौँ । भन्सार दरमा १० वर्षसम्मलाई मात्र सहुलियत दिउँ । अन्य नीतिगत कठिनाइहरुलाई पनि खुलाउँदै जाउँ,” उनले भने ।
संसद्मा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पनि थापाले जुत्ता र कपडाको उदाहरण दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए । “नेपालीले वर्षमा ९ करोड जोर जुत्ता खरिद गर्छौं । ५ करोड विदेशबाट ल्याउँछौं, साढे ४ करोड नेपालमै उत्पादन हुन्छ । भन्सारमा हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपालमा नै ८ करोड ५० लाख जुत्ता उत्पादन गर्न सकिन्छ,” उनले भनेका थिए । अर्कोतिर आयात भएको १० प्रतिशत कपडाले मात्र भन्सार तिरेको बताउँदै उनले भन्सार छली हुँदा राजस्वमा समेत असर परेको बताए । “३ करोड नेपालीलाई वार्षिक २० करोड मिटर कपडा चाहिन्छ, १० प्रतिशत नेपालमा उत्पादन हुन्छ, बाँकी विदेशबाट आयात हुन्छ,” उनले भने, “बाहिरबाट आयात भएको कपडाको तथ्यांक निकाल्ने हो भने १० प्रतिशत कपडाको मात्रै भन्सार तिरेको देखिन्छ । यदि त्यतिमात्र कपडा आयात भएको भए कसैको घरमा तन्ना नहुनुपर्ने, कसैकोमा पर्दा । यो सबै चोरी बजारीबाट आएको छ । यसमा ध्यान दिने हो भने आयात रोक्न सकिन्छ ।” कुन क्षेत्रमा कति समयको लागि कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको प्रवन्ध गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले नेताहरुको कुर्सीमात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसक्ने बताए । उनले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको भन्दै देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । “सरकारको तीन वर्षे, पाँच वर्षे कार्यक्रम नहेरौं, लामो हेरौं । अर्को कुरा नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिष्माभन्दा पनि अन्ततः पद्धति र प्रणालीमा सुधार नगरीकन डेलिभरी हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हामीले निरन्तर देखिराखेका छौं,” उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले विकासको दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । विकासका लागि ५ वर्षको नभई २५ वर्षको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालमा काम गर्न नीतिको कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको बताइन् ।